Company Workers and Their Expected Salary | The World of Pinkgold
Company Workers and Their Expected Salary
Posted on February 15, 2008 by cuttiepinkgold
ကျွန်မ အခုတစ်လော အပျူထင်းနေတယ်ရှင့်။ အပျူထင်းတာ သိကြလား။ အပျင်းထူတာလေ.. စာရိုက်ရမှာ အပျင်းထူးတာနဲ့ သူများပိုစ့်တွေနဲ့ လုပ်စားနေတာ တော်တော်လေးတော့ များနေပြီ။ အဲတော့ မဖြစ်သေးပါဘူးလေ.. သူများတွေကိုလည်း အားနာစရာ ကောင်းနေပြီ.. ပြီးတော့ ရေးခိုင်းထားတဲ့ ပိုစ့်လေးတစ်ခုကိုလည်း မရေးရသေးတာနဲ့ ပျင်းတာကို ခဏနားပြီး စာရိုက်ဖို့ ပြင်ရတော့တာပေါ့။ ကျွန်မ 100 မြောက်ပိုစ့်ကို တင်တုန်းက ကိုကြီးစေးထူးက ကွန်းမန့်လေး ရေးသွားတာပါ။ အဲတုန်းက ကျွန်မက အင်တာဗျူး ပုံစံလေး တစ်ခုကို ရေးခဲ့ပြီး ၀မ်ထန်းတွေရဲ့ မျှော်မှန်းလစာကိုပါ အင်တာဗျူးမှာ မေးတတ်ကြတော့ အဲဒါလေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူကရေးခိုင်းတာပါ။
ကလိုစေးထူး Said: မျှော်မှန်းလစာ ဆိုတာကို တွေ့ဖူးနေ၊ ကြားဖူးနေတာတော့ ကြာပြီ။ သိချင်တာက အဲဒီလိုမျိုး အလုပ်လျှောက်သူက သူ့မျှော်မှန်းလစာကို တင်ပြတဲ့အခါ ကုမ္ပဏီတွေက ဘယ်လိုအခြေအနေကို မူတည်ပြီးတော့ လစာကို ပြန်သတ်မှတ်လဲ ဆိုတာပါပဲ။ ဆိုကြပါစို့၊ လူတယောက်က သိပ်တော်ပေမယ့် တောင်းတဲ့ လစာက သိပ်နည်းနေရင်ရော `ဒါတော့ မဖြစ်သင့်ဘူး´ ဆိုပြီး သူ့ပညာနဲ့ ထိုက်တန်တဲ့ လစာမျိုး တိုးပေးတာမျိုး၊ ပြီးတော့ မတန်တဆ လစာတောင်းတယ်လို့ ယူဆရတဲ့ အခါမှာရော လစာကို ဘယ်လိုပြန်ညှိယူသလဲဆိုတာ ကို ဗဟုသုတအနေနဲ့ ဖြစ်ဖြစ် သိချင်ပါတယ်။ ညီမ အချိန်ရရင် ရေးပေးဖို့ တောင်းဆိုပါရစေ။ အဲ…၊ ရေးဖြစ်ရင်လည်း လက်လာတို့ပါအုံး။ 😀
မျှော်မှန်းလစာ ဆိုတာကို တွေ့ဖူးနေ၊ ကြားဖူးနေတာတော့ ကြာပြီ။ သိချင်တာက အဲဒီလိုမျိုး အလုပ်လျှောက်သူက သူ့မျှော်မှန်းလစာကို တင်ပြတဲ့အခါ ကုမ္ပဏီတွေက ဘယ်လိုအခြေအနေကို မူတည်ပြီးတော့ လစာကို ပြန်သတ်မှတ်လဲ ဆိုတာပါပဲ။ ဆိုကြပါစို့၊ လူတယောက်က သိပ်တော်ပေမယ့် တောင်းတဲ့ လစာက သိပ်နည်းနေရင်ရော `ဒါတော့ မဖြစ်သင့်ဘူး´ ဆိုပြီး သူ့ပညာနဲ့ ထိုက်တန်တဲ့ လစာမျိုး တိုးပေးတာမျိုး၊ ပြီးတော့ မတန်တဆ လစာတောင်းတယ်လို့ ယူဆရတဲ့ အခါမှာရော လစာကို ဘယ်လိုပြန်ညှိယူသလဲဆိုတာ ကို ဗဟုသုတအနေနဲ့ ဖြစ်ဖြစ် သိချင်ပါတယ်။ ညီမ အချိန်ရရင် ရေးပေးဖို့ တောင်းဆိုပါရစေ။ အဲ…၊ ရေးဖြစ်ရင်လည်း လက်လာတို့ပါအုံး။ 😀
ဟုတ်ကဲ့ပါ.. ကျွန်မမတို့တွေက အင်တာဗျူးရင် ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကျွန်မတို့ကို အင်တာဗျူး ခံရရင် ပဲဖြစ်ဖြစ် မျှော်မှန်း လစာကို မေးတတ်ကြပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ကုမ္ပဏီ တစ်ခုမှာ Pay Scale တစ်ခုကို သတ်မှတ် ထားလို့ပါပဲ။ မန်နေဂျာ level ကတော့ ဘယ်လောက်၊ Supervisor level ကတော့ ဘယ်လောက်၊ ရိုးရိုး staff တွေကတော့ ဘယ်လောက် စသည်ဖြင့် သတ်မှတ်ထားတာကို အားလုံးလည်း သိကြမှာပါနော်။ အဲတော့ ကျွန်မတို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ လစာနဲ့ အင်တာဗျူး လာဖြေသူ တစ်ယောက် လိုချင်တဲ့ လစာကို ချိန်ရတယ်။ ကိုယ်ပေးထားတဲ့ Pay Scale တွင်းမှာ ၀င်ရင်တော့ အိုကေ ပြသနာမရှိဘူး။ ကိုယ်ကဗျူးလို့ ကြိုက်ရင်ခန့်ထားလိုက်ရုံပဲ။ သူလိုချင်တဲ့ လစာက သူ့ level အရ ကုမ္ပဏီက သတ်မှတ်ထားတဲ့ လစာထက် များနေတယ် ဆိုရင် လစာညှိုနှိုင်း တာမျိုးတွေ ဘာတွေ လုပ်ရတော့မယ်။ ကျွန်မတို့ရဲ့ သတ်မှတ်လစာက ဒီအဆင့်အတွက်ဆိုရင် ဒီလောက်ရှိတယ်။ အမတောင်းထားတဲ့ လစာက နည်းနည်းတော့ များနေတယ်။ အဲတော့ ကျွန်မတို့ Probation အနေနဲ့3လလောက် ခန့်မယ်။ ကာလကျော်သွားလို့ အမရဲ့ လုပ်ရည်ကိုင်ရည်၊ လုပ်နိုင်မှု စွမ်းအား အပေါ်မှာ မူတည်ပြီး လစာတစ်ခု သတ်မှတ်ပေးမယ်။ တောင်းထာသလောက်လည်း ဖြစ်ရင် ဖြစ်မယ်။ တောင်းထား တာထက်လည်း များရင် များမယ်.. ဒီလို ညှိုနှိုင်းမှု လေးတွေ လုပ်ရတာတာပေါ့။
တစ်ချို့လူတွေရှိတယ်။ လုံးဝကို အညှိုမခံဘူး။ ငါတော်တယ် ငါတတ်တယ်။ ဒီလောက်မှ ငါ့ကို မပေးနိုင်ရင် နိုးပဲ။ အဲလို ခံယူထားတဲ့ လူမျိုးတွေရှိတယ်။ အဲတော့ ပြန်စဉ်းစားရတယ်။ ကိုယ့်က ဒီလူကို သူတောင်းသလောက် လစာ အများကြီးပေးပြီး အရဲစွန့် ခန့်မှာလား။ သူက တော်တယ် တတ်တယ်သာ ပြောနေတာ။ ဒါကို ကိုယ်က ခန့်ကြည့်မှ သိမှာလေ။ ဒါမှမဟုတ် သူ့ထက် မလျော့တဲ့ နောက်တစ်ယောက်ကို Probation ကာလပေးပြီး သူ့ရဲ့ အစွမ်း အစအပေါ် မူတည်ပြီး လစာပေးမလား။ အဲလိုမျိုးတွေကို ယှဉ်ပြီး စဉ်းစားကြတဲ့အခါ ငါမှ ငါဖြစ်နေတဲ့ လူမျိုးတွေက တော်ရက်သားနဲ့ ကျန်ခဲ့တာ မျိုးတွေ ဖြစ်တတ်တယ်။ နည်းနည်းလေးလောက် စောင့်ပြီး သူလိုချင်တဲ့ လစာကို စောင့်ယူမလား။ ဒါမမဟုတ် နောက်တစ်နေရာနဲ့ ပြောင်းချိတ်မလား ဆိုတာကတော့ သူတို့ရဲ့ ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ပေါ့လေ။ ကုမ္ပဏီတော်တော် များများကတော့ ၀န်ထမ်းခန့်ရင် လစာနည်းနည်းနဲ့ တော်တဲ့ သူမျိုးကို လိုချင်တတ်ကြတာ ချည်းပါပဲ။ မြန်မနြိုင်ငဲမှာ တော်တဲ့ သူကို ထိုက်သင့်တဲ့ လစာပေးပြီး ခေါ်တဲ့ နေရာ နည်းနည်းတော့ ရှားတယ်ရှင့်။ Foreign realted companies တွေကတော့ ပေးပါတယ်။ တော်တော်လေးကို ပေးပါတယ်။ အဲတော့ အဲလိုနေရာ မျိုးမှာ လျှောက်တဲ့ သူတွေ တန်းစီနေတတ်တာလည်း မဆန်းပါဘူး။
နောက်တစ်ခုက လစာတောင်တဲ့ အချိန်မှာ ကိုယ်လျှောက်တဲ့ Organization ရဲ့ အခြေအနေကိုလည်း ကြည့်ရပါမယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ Dielthem & Co Ltd ဆိုရင် တော်တော်လေးကို လစာကောင်းပါတယ်။ Nivea. Doru, Glorin, Ovaltine စတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ဖြန့်ချီရေး လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီပါ။ အဲဒီမှာ ဆိုရင် Marketing Executive တစ်ယောက်ရဲ့ လစာတောင်3သိန်း ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှိပါတယ်။ တစ်ခြား ကုမ္ပဏီက Marketing Executive တွေထက် ထူးပြီး အလုပ်များတာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ Organization က နိုင်ငံခြားသား အုပ်ချုပ်တယ်၊ Image ကောင်းတယ်၊ ၀န်ထမ်းတွေကို Facility အပြည့်ပေးထားတယ်။ အဲတော့ အဲလိုနေရာမျိုးမှာ အလုပ်လျှောက်ချင်တဲ့ သူတွေများတယ်။ သူက အလုပ်ခေါ်ရင်လည်း နီးစပ်ရာပဲ အသိပေးပြီး ခေါ်တဲ့အတွက် သူ့ဆီမှာ အလုပ်ခေါ်တာကို သိဖို့လည်း သိပ်တော့ မလွယ်လှပါဘူး။ ကိုယ့်မှာ အသိတစ်ယောက်လောက်ရှိမှ ဖြစ်နိုင်မယ့် အရာမျိုးပါ။ အဲလို နေရာတွေမှာ တော်တဲ့သူတွေ တန်းစီနေတတ်တယ်။ တစ်ကယ့် အရည်အချင်းရှိတဲ့သူတွေကို Pay ကောင်းကောင်းပေးပြီး ခန့်ထားတော့ ကုမ္ပဏီရဲ့ အနာဂတ်ဟာလည်း လှပေနေတော့မှာပေါ့။ ၀န်ထမ်းတွေ အနေနဲ့လည်း လုပ်ရတာ ပျော်တယ်လေ။ ဘာကြောင့်လဲ။ နေရာတိုင်းမှာ အလုပ်တိုင်းမှာ Work Load, Pressure, Stress ဆိုတာ ရှိစမြဲပါ။ ၀မ်ထန်းတွေ ပြောင်းဂ ရွှေ့ရတဲ့ အကြောင်းရင်းက သူ့ထက်သာတဲ့ နေရာကို တွေ့လို့ပါပဲ။ ကျွန်မပြောချင်တာ လစာပါ။ ၀မ်ထန်း တစ်ယောက်ဟာ ကုမ္ပဏီ တစ်ခုမှာ မြဲတယ်။ ဘာကြောင့်ပါလဲ။ အကြောင်းရင်းက နည်းပါတယ်။ လစာကောင်းလို့၊ ကိုယ့်ရဲ့ Worksphere သည် လစာမကောင်းသော်လည်း ၀မ်းထန်းတွေ စုစုစည်းစည်းနဲ့ ပျော်စရာ ကောင်းလို့ ဆိုတဲ့ အချက်တွေဟာ အဓိက အချက်တွေပဲလို့ ကျွန်မထင်ပါတယ်ရှင်။
နောက်တစ်ခုက ကိုစေးထူး ပြောထားတဲ့.. လာလျှောက်တဲ့ ၀န်ထမ်းက တော်တယ်။ ဒါပေမယ့် သူ လစာနည်းနည်းပဲ တောင်းတယ်။ မဖြစ်သင့်ဘူးဆိုပြီး တိ်ုးပေးမလား။ ဟုတ်ကဲ့ ဒါမျိုးက ဖြစ်ခဲပါတယ်။ သူ့ရဲ့ Resume မှာတော့ Experience and Qualifications တွေ ရေးထားတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတစ်ကယ် တော်မတော် ဆိုတာကိုတော့ ခိုင်းကြည့်မှ သိနိုင်မှာလေ။ အဲတော့ သူ့ကို ကိုယ့်ရဲံ Pay Scale အတိုင်းပဲ ပေးပြီး ခန့်တာ များပါတယ်။ နောက်တော့မှ သူ့ရဲ့ Performance ကိုကြည့်ပြီး လစာတိုးပေးတာဟာ မြန်မာပြည်မှာတော့ ထုံးစံ တစ်ခုလို ဖြစ်နေတယ် ထင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်မ စောစောက Dielthem & Co. Ltd ကို ဥပမာ ပေးပြီး ပြောခဲ့လို့ သူတစ်ခုထဲပဲ ကောင်းတယ် မထင်ပါနဲ့နော်။ ဒီလို ကောင်းတဲ့ Organization တွေ မြန်မာပြည်မှာ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ၀န်ထမ်းတစ်ယောက် တော်တဲ့ အကြောင်းက သတင်းမွှေးတယ်၊ တော်တယ်ဆိုတာကို နောက် Organization ကလည်း သိနေတယ် ဆိုရင်တော့ ကိုယ်တောင်းတဲ့လစာကို ပေးပြီး ခေါ်တတ်ကြပါတယ်။ ဥ့ပမာ.. ရွှေထက်က Blazon မှာ လုပ်ရည်ကိုင်ရည် ရှိတယ်၊ တော်တယ် ဆိုပါစို့..(ဟဲဟဲ) သူ Blazon ကများ အလုပ်ထွက်သွားရင် City Mart, Sein Gay Har Supercenter စတာတွေက သူတို့ဆီမှာ လုပ်ဖို့ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ လစာကိုပေးပြီး ဦးဆောင်ဖို့ လာခေါ်တယ် အဲလိုမျိုးပေါ့နော်။ (အလုပ်တော့ ထွက်ထားတယ်.. ဘယ်သူမှတော့ အဲလို အလုအယက် လာမခေါ်ဘူး.. အဲလိုတော်တာ ရွှေထက်တို့.. အဟိ)
ဒီနေရာမှာ ကျွန်မကြားဖြတ် ပြောချင်ပါတယ်။ ပိုစ့်လည်း ရှည်နေပြီထင်တယ်။ သည်းခံဖတ်ပါနော်။ ကျွန်မကတော့ အလုပ်တစ်ခုက ထွက်လာပြီးရင် ကိုယ်ထွက်လာတဲ့ အလုပ်နဲ့ ပုံစံတူ နေရာတစ်ခုမှာ ၀င်မလုပ်ချင်ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Information တွေက တစ်နည်းနည်းနဲ့ ပေါက်ကြားမှာ စိုးလို့ပါ။ ဥပမာ.. Blazon ကနေ အလုပ်ထွက်ပြီ. စိန်ဂေဟာမှာ အလုပ်ဝင်တယ် ဆိုပါစို့.. Blazon မှာ တရုပ်နှစ်သစ်ကူးဆို ဘယ်လိုပွဲမျိုးတွေ လုပ်နေကျလဲ.. သူတို့ကတော့ မေးမှာပါပဲ… ကိုယ်ကလည်း သိနေတော့ ပြောပြမိမှာပါပဲ.. အဲတော့ အလုပ်ထွက်လာတယ် ဆိုပေမယ့် ကိုယ်က အဲမှာ ရှိနေတုန်းက သူများပေးတဲ့ လစာကို ယူပြီး လုပ်လာတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် သတင်းတွေကို အလဟသ ပေးမိတာမျိုးတော့ မဖြစ်ချင်ပါဘူး။ ကိုယ်လုပ်လို့ ကိုယ်ရတာလို့ ဘယ်လိုပဲ ပြောပြော ဒါဟာ စောင့်ထိန်းသင့်တဲ့ Ethic တစ်ခုလို့ မြင်ပါတယ်ရှင်။ ပုံစံတူ မဟုတ်ဘူး. ကိုယ်လုပ်လာတဲ့ အလုပ်နဲ့ Nature ချင်းတူးတဲ့ Trading Company စတဲ့ နေရာ တစ်ခုခုမှာဆိုရင်တော့ အိုကေပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက လစာ ကောင်းကောင်းလိုချင်ရင် ကိုယ်လျှောက်မယ့် ကုမ္ပဏီက ဘယ်လိုအရည်အချင်းမျိုးရှိရင်၊ ဘယ်လို ဘွဲ့မျိုးရှိရင် ကြိုက်တတ်လဲ ဆိုတာကို သိထားရင်လည်း ကောင်းပါတယ်။ ကျွန်မ အလုပ်လုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ Blazon တို့၊ စက်မှု (1) ၀န်ကြီး ဦးအောင်သောင်းရဲ့သား လုပ်တဲ့ အောင်ရီဖြိုး ကုမ္ပဏီတို့ ဆိုရင် MBA ဘွဲ့ရတွေကို သိပ်ကြိုက်ပါတယ်။ အဲတော့ အတွေ့အကြုံ ရှိရှိ၊ မရှိရှိ MBA တွေကို လစာ ကောင်းကောင်း ပေးပြီး ခေါ်ပါတယ်။ (အလုပ်ထွက်တာတောင် မကြာသေးဘူး.. ရွှေထက်တို့ ကောင်းကောင်းဖွနေပြီ အဟိ…) အဲတော့ ကိုယ်လျှောက်မယ့်နေရာနဲ့ ကိုယ်ရဲ့ အရည်အချင်း ကိုက်လား မကိုက်လား၊ သူတို့လိုအပ်ချက်နဲ့ ကိုယ့်မှာ ရှိနေတာ ကိုက်လား မကိုက်လား ဆိုတာကို အရင်သိထားရင်လည်း ကောင်းပါတယ်ရှင်။ တစ်ချို့ကုမ္ပဏီတွေဆို အင်တာဗျူးဝင်ရင် စီဗီတောင် မကြည့်ဘူး Certificate တွေ ဘာတွေပါလဲ အရင်ပြပါ ဆိုတာမျိုး လုပ်တတ်ကြပါတယ်။ သူတို့လိုချင်တာ အရည်အချင်းလား၊ လက်မှတ်တွေလားတော့ မသိဘူးပေါ့နော်။ တစ်ကယ်တမ်းကြတော့ မြန်မာပြည်မှာ လက်မှတ်သာရှိပြီး ပညာမရှိတဲ့သူတွေ တစ်ပုံကြီးပါ။ အဲတော့ ကျွန်မ ပြောချင်ပါတယ် မြန်မာပြည်မှာ အလုပ်ကောင်းကောင်းရချင်ရင် တစ်ခါ တစ်လေမှာ အရည်အချင်းထက် လက်မှတ်တွေက အရေးကြီးတယ်ရှင့်။ 😛
အိုကေ.. ကျွန်မရေးတာ နည်းနည်းလေးလဲ ရှည်သွားပြီ။ ပြည့်စုံသွားပြီလို့လည်း ထင်ပါတယ်။ ကျွန်မ မှားနေတာတွေ ရှိခဲ့ရင်လည်း ထောက်ပြပေးပါနော်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်မလည်း ကျောင်းပြီးကတည်းက အလုပ်သာလုပ်ခဲ့တာ.. တစ်နေရာတည်းမှာပဲ ဇောက်ချ လုပ်ခဲ့လို့ပါ။ Blazon မှာ3နှစ် တိတိလုပ်ခဲ့တာပါ။ အဲတော့ ကျွန်မရဲ့ အမြင်တွေ၊ အကြားတွေကို ပေါင်းစပ်ပြီး ရေးရတာမို့ မှားနေတာ လိုနေတာတွေလည်း ပါပါလိမ့်မယ်။ ခုတော့ အပြောင်း အလဲလေး လုပ်ချင်လို့ အလုပ်က ထွက်လိုက်ပြီး အိမ်မှာ နားနေပါတယ်။ နောက် အလုပ်မရှာခင် အားပြန်မွေးတာပေါ့။ သြော်ပြီးတော့ ကုမ္ပဏီ ၀န်ထမ်းတွေရဲ့ လစာကို အကြမ်းဖျဉ်း သိသလောက်လေး တစ်ချက် ရေးပြမယ်နော်။
Basic Salary…. 300,000
Requirements….. At least3yrs experiences in Rlated Field, Good English, Good Knowledge of Computer, Internet and Email, Master Degree Holder (MBA, MPA, ME.. etc.. in accordance with the work)
Admin Manager/Merchandising Manager/ Front-Office Managers
Basic Salary…… 150, 000
Requirements: At least3yrs experiences in related fields, Good English, Good Knowledge of computer, internet and email, Degree Holer (Any Degree)
Executives/ Supervisors/ In-Charge
Basic Salary…. 70,000 to 100,000
Requirements: At least 1 yrs experiences in related fields, Good English, Good Knowledge of computer, internet and email, Degree Holer (B.Com, B.A, B.E,etc.. in accordance with the work )
Basic Salary…… 150, 000 to 200, 000
Requirements: At least3yrs experiences in related fields, Good English, Good Knowledge of computer, internet and email. Degree Holer (B.Com, CPA, ACCA )
Basic Salary……. 50000 to 70000
Requirements: At least 1 yrs experiences in related fields, Good English, Good Knowledge of computer, internet and email. Degree Holer (B.Com, LCCI Level-3 )
Basic Salary….. 35000 to 50000
Requirements: At least 1 yrs experiences in related fields or No Experience. Degree Holer (B.A, B.Sc etc)
ဒါကတော့ ကျွန်မ သိသလောက်လေး မျှဝေပေးထားတာပါရှင်။ ကုမ္ပဏီတွေ အလိုက်ပေးကြတဲ့ Travelling Allowance, Daily Snack Fees, Attendence Fees စတဲ့ အရာတွေ အပေါ်မှာ မူတည်ပြီးတော့ Total Salary တွေ နည်းတတ် များတတ်ပါသေးတယ်ရှင်။
Filed under General Knowledge |	4 Comments
Saung Yune La (aka) Way on February 16, 2008 at 10:54 pm said:
ဒါဝန်ထမ်းတိုင်းမှာရှိသင့်မွေးမြူသင့်တဲ့Work Ethic တစ်ခုပါဘဲ ညီမလေးရေ..ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးရှိတဲ့ငါ့ညီမတစ်ယောက်C.E.Oတစ်ယောက်အထိဖြစ်လာနိူင်တဲ့အထိကြိုးစားနိူင်ပါစေကွယ်..အကိုတို့ကတော့ကျောင်းဆက်တက်ဖို့ပိုက်ဆံမပေးနိူင်တော့လို့ MBAအတွက်ကိုဘယ်မှာဓါးပြတိုက်ရမလဲစဉ်းစားမရဖြစ်နေတယ်..ဖြစ်ချင်တိုင်းမဖြစ်ရတာကိုကလူ့ဘဝဘဲမဟုတ်လားလေ..
ကလိုစေးထူး on February 18, 2008 at 10:36 pm said:
ရေးခိုင်းထားပြီးတော့ လာဖတ်တာ နည်းနည်းလေး နောက်ကျသွားတာကို ခွင့်လွှတ်ပါ။ သေသေချာချာကို ဖတ်သွားပါတယ်။ ရေးထားတာက တော်တော်လေးကို စုံစုံလင်လင် ရှိလှပါတယ်။ ဒီပို့စ်က ကုမ္ပဏီတွေမှာ အလုပ်လျှောက်ချင်သူတွေအတွက်လဲ တဖက်တလမ်းက အထောက်အကူပေးနိုင်မှာ သေချာတယ်။ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်း လစာတွေကလဲ သွားရည်ယိုစရာပဲ။
MELODYMAUNG on February 19, 2008 at 5:28 am said:
သိုင်းခရု။ လစာတွေကတော့ တကယ်ပဲ ကိုစေးထူး ပြောသလို သွားရည်ယိုစရာကြီး
operation manager လစာဆိုရင် ပိုမိုက်သေး အဟေးဟေး
ပြီးတော့ operation, sales & marketing, reservation ပါ တပါတည်း တာဝန်ယူရတဲ့သူမျိုးဆိုရင် လစာ သုံးလခ ပေးတဲ့ ကုမ္ပဏီလေးများ မသိဘူးလားဟင် သိရင် မိတ်ဆက်ပေးပါလားကွယ် ငှက်ငှက်ငှက်
ဒါပေသိ ရွှေထက်ကိုတော့ ဒီပေးစကေးတွေ ပေးရမှာကြောက်လို့ City Mart, Sein Gay Har Supercenter မခေါ်ရဲဘူးနဲ့ တူပါရဲ့ အဟိဟိ
လစာကောင်းကောင်းနဲ့ လုပ်ငန်းခွင်အသစ်တခုမှာ အမြန်ဆုံးပျော်ရွှင်စွာ အလုပ်ဝင်နိုင်ပါစေဗျို
သန့်ဇော်မင်း on February 19, 2008 at 12:45 pm said:
လစာတွေကတော့ တကယ်ကို သွားရည်ယိုစရာပါလား..